Yan Aung: လဲရာသူခိုးထောင်းခံနေရသော မြန်မာပြည်သူများ.....
ဒီပို့စ်လေးကို ကြိုက်လို့ ပြန်ပြီးတော့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်. ရေးသူကတော့ ကိုအောင်သူငြိမ်းပါ. ရွက်မွန်ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားတာပါ.
စနစ်တကျ ရေးသားပြုစုထားတဲ့ ဒီပို့စ်လေးထဲမှာ ယထာဘူတကျကျ ဆွေးနွေးဝေဖန် အကြံပြုထားတာလေးတွေကို တွေ့ရပါတယ်. ဒါကြောင့် စာဖတ်ပရိသတ်တို့ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်အောင် ပြန်လည်ဝေမျှဖော်ပြလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ရွက်မွန် - အောင်သူငြိမ်း
mann tal than shew so phat phuu loot lar?anar ma cutt bal ta-ta pya nay tal. >(